Senior Account (AR) Archives - Glory Assumption Space
Senior Account (AR)
Senior Accountant ( AR ) – Female - (5) Posts
Location in : MingalartaungNyunt
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိ သည် ။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁) Senior Accountant ( AR ) – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် /မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ။ • BCom / Level ( III ) အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ( OR ) Any graduate /ACCA Part ( I ) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် (၂၈ - ၃၅ နှစ်) အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • Accountant / Junior Accountant Position တွင် အနိမ့်ဆုံး ( ၅ ) နှစ်အထက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ • Senior Accountant Position တွင် (၃) နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူး သူဖြစ်ရမည်။ • AR ပိုင်းနဲ့ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ • Trading / Manufacturing လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူး သူဖြစ်ရမည်။ • Advance Excel ,Accounting Software ကိုကောင်းမွန်စွာ သုံးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • Report ကိုအချိန်နှင့် တပြေညီလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Date line နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ • အခါအားလျှော်စွာ Overtime ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်ရှိ Trading Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2818" align="alignnone" width="636"] Asian female accountant or banker making calculations. Savings, finances and economy concept throughalaptop.; Shutterstock ID 560877814[/caption]
Senior Account (AR) – Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံခြား Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အမြန် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Senior Account (AR) – Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ • Any graduated and Diploma in Accounting • Age about 26 and above • At least2years experience in similar role • Able to use Accounting software and communicable in English Language • အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:00 PM ) • ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ဖယ်ရီရှိသည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )